Vehivavy Noraràn’ny Fitsarana Saodiana Tsy Hanatrika Ny Fotoam-pitsarana Ireo Mpikatroky Ny Zon’Olombelona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2013 4:05 GMT
Folo andro taorian'ny fanomezan-dalana ilay vehivavy Saodiana voalohany hanana mpisolo vava, noraràn'ny fitsarana tsy hanatrika ny fotoam-pitsarana ilay mpikatroka Dr. Abdualkareem al-Khudar izay misokatra ho an'ny daholobe ny vehivavy, mpikambana mpanorina ny Fikambanan'ny zon'olombelona voalohany manohitra ny Fanjaka-panjaka, Fikambanana Mpiaro ny Zo sivily sy politika Saodiana (ACPRA) i Dr. Abdualkareem.
Sarotra ho an'ny fikambanana tahaka ny ACPRA ny hiasa am-pilaminana noho ny lalàna Saodiana. Tsy mankasitraka ny zo fototry ny olombelona tahaka ny fahalalaham-pitenena ny fitondra-panjaka, ary mandràra ireo karazana fikambanana sy mametra ny fivoriam-bahoaka.
Mpanohana lehilahy sy vehivavy maherin'ny 40 no tonga tao amin'ny fitsarana ao an-tanànan'i Buraidah mba hanatri-maso ny fotoam-pitsarana an'i Dr. al-Khudar tamin'ny 24 Aprily 2013, izay farany amin'ireo andiam-potoam-pitsarana hanenjehana ireo mpikatroka zon'olombelona ao amin'ny Fikambanana ACPRA. Tamin'ny taona 2012, mpikatroka zon'olombelona malaza am-polony no efa nampidirina am-ponja tao Arabia Saodita.
Nolavin'i al-Khudar ny fandraràna ireo vehivavy tsy hanatrika ny fotoam-pitsarany ka nandà tsy hiditra tao amin'ny efi-pitsarana izy. Nosamborin'ny polisy izy raha nitsangana tao ivelan'ny fitsarana. Nanatona ny filohan'ny Fitsarana Heloka Bevava ny mpisolo vava azy Abdulaziz Shubaily (@a_abdulaziz300) [ar] mba hanontany ny antony nisamborana ny olona arovany, ka hoy izy nisioka:
@a_abdulaziz300 Nankao amin'ny fitsarana aho ary nihaona tamin'ny filohan'ny fitsarana Ali al-Omar. Nilaza izy fa namoaka didy fanagadrana efa-bolana ho azy ny mpitsara Ibrahnim al-Hussni.
Tamin'ny volana lasa, nisy ny didim-pitsarana navoaka tamin'ny raharaham-pitsarana ireo mpikambana mpanorina hafa ny ACPRA, Dr. Mohammad al-Qahtani sy Dr. Abdullah al-Hamid izay naharitra sivy volana. Nahazo sazy folo sy iraikam-binifolo taona an-tranomaizina tsirairay avy izy ireo noho ny “fanakorontanana ny fanohanana ny fanjakana masi-mandidy sy ny mpandimby azy” ary ny “fikasana hanakorontana ny fandrosoan'ny firenena”.
Nanambara ny ACPRA fa araka ny filazan'i al-Qahtani sy al-Hamed, tsy hametraka fitoriana azy ireo ny governemanta raha manaiky hampitsahatra ny fikatrohana ataony izy ireo, hoy izy roalahy nilaza: aleon'izy ireo “migadra toy izay hangina.”
Navela hanatrika ny fotoa-pitsaran'izy roalahy ireo ny vehivavy tamin'izany, saingy androany, nilaza andinin-dahatsoratra koranika ny mpitsara ho fandraràna ny vehivavy tsy hanatrika ny fotoam-pitsarana. Mpikambana ao amin'ny ACPRA, Abdullah al-Sied (@abdulllah1406) nisioka hoe [ar]:
Dr. al-Khudar (eo afovoany) alohan'ny hanombohan'ny fotoam-pitsarana. Sary nampakarin'i @acprahr
@abdulllah1406: Nanonona andininy Koranika ny mpitsara Ibrahim al-Hussni: “Ary mijanona ao an-tranonareo” ho fandraràna ny vehivavy tsy hanatrika ny fotoam-pitsarana ny ACPRA.
Nametraka tamim-pomba ofisialy ny lalàna Sharia i Arabia Saodita. Tsy miankina amin'ny lalàna soratana ny fehezan-dalàna famaizana ao amin'ny firenena fa miankina amin'ny fanehoan-kevitra sy ny fanatsoahan-kevitra amin'ny Korana sy loharano hafa amin'ny Sharia, izay matetika fanahy iniana ataon'ireo mpitsara, mpitondra fivavahana notendren'ny governemanta.
Nankany Buraidah mihitsy i Bandar Shammari (@xalshammari) mpikatroka ny zon'olombelona mba hanatrika ny fotoa-pitsarana saingy tsy navela niditra noho ny “fomba fijeriny”. Hoy izy nisioka [ar]:
@xalshammari: Tsy navelan'ny mpiambina ny Fitsarana Heloka Bavava ao Buraidah hiditra aho satria “tsy mitovy amin'ny Saodiana ny fomba fijeriko.” 🙁
Mpikatroka Waleed Abualkair (@abualkhair) [ar] nilaza hoe:
@abualkhair: Milaza amin'ireo vahiny ny mpanao politika [fitondrana] fa miaro ny zon'ny vehivavy izany, saingy mitoetra ao amin'ity fiarahamonina ity ny fototry ny olana. Ankehitriny, manohana mpitsara manevateva vehivavy ny [fitondrana] ary managadra ireo reformista.
Nandritra ny fotoam-pitsarana teo aloha, nangataka i al-Khudar mba ho mpitsara hafa no hisahana ny raharahany noho ny fifandirana teo aminy sy ny mpitsara talohan'ny fotoam-pitsarana. Saingy nolavin'ilay mpitsara ny fangatahany izay nilaza fa tsy hisy fiantraikany amin'ny fitsarana azy izany.
Iray amin'ireo fanjakatokana tsy refesi-mandidy manerantany sy tompon-dakan'ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona i Arabia Saodita izay olona maherin'ny 30.000 no efa nampidirina am-ponja tsy amin'ny antony.